Turkiga oo 20 Qof oo Sacuudiga u dhashay dacwad ku soo oogay | Qaran News
Turkiga oo 20 Qof oo Sacuudiga u dhashay dacwad ku soo oogay
Writen by Qaran News | 3:24 am 26th Mar, 2020
Turkiga oo 20 qof oo Sacuudiga u dhashay dacwad ugu soo oogay dilkii Jamaal Khaashuqji
Sawirrada Madaxweynaha Turkiga Erdogan iyo weriye Jamaal Khaashuqji
Dowladda Turkiga ayaa dacwad kusoo oogtay 20 qof oo lagu tuhunsan yahay inay ku lug lahaayeen dilka wariyihii Sacuudiga u dhashay ee Jamaal Khaashuqji, oo laga fuliyay magaalada Istanbul bishii October ee sanadkii 2018-kii.
Dacwad oogeyaasha ayaa sheegay in labada qof ee dilkaas abaabulay ay kala yihiin ku xigeenkii hore ee madaxa sirdoonka Sacuudiga Axmed Casiiri iyo Saud al-Qahtani, oo horay saaxiib ula ahaa boqortooyada.
18-ka qof ee kale ayaa lagu eedeeyay “inay si ula kac ah dilka ugu fuliyeen” gudaha qunsuliyadda Sacuudiga.
Sirdoonka reer Galbeedka ayaa aaminsan in dilkaas uu amar ku bixiyay dhaxal-sugaha borotooyada Sacuudiga Maxamed Bin Salmaan – arrintaas oo uu isagu beeniyay.
Jamaal Khaashuqji wuxuu ahaa wariye caan ah oo dhaleeceeya dowladda Sacuudiga
Wakiilka gaarka ah ee ay Qaramada Midoobay u xil-saartay baaritaanka dhacdadaas ayaa sheegtay in Khaashuqji “uu noqday nin lagu fuliyay dil ula kac ah oo lasii qorsheeyay, oo ah dil caddaaladda aan loo marin oo ay mas’uul ka tahay dowladda Sacuudiga”.
Xilliga uu dhimanayay Jamaal, oo ahaa 59 jir, wuxuu u shaqeynayay wargeyska Washington Post, wuxuuna ku caan baxay dhaleeceynta uu u jeedin jiray boqortooyada Sacuudiga ee uu saameynta weyn ku leeyahay Maxamed Bin Salmaan.
Madaxda Sacuudiga ayaa dilka Khaashuqji ku tilmaamay fal ay fuliyeen “shakhsiyaad ku dhaqaaqay howlgal aan loo dirsanin”.
bishii December ee sanadkii lasoo dhaafay, maxkamad ay maamusho boqortooyada ayaa xukun dil ah ku ridday shan qof oo aan la magacaabin halka ay saddex kalena xabsi ku xukuntay, kuwaasoo dhammaan loo heystay dilka wariyaha.
Maxay yihiin dacwadaha uu kusoo oogay Turkiga?
Bayaan ay dacwad oogeyaasha Istanbul kasoo saareen maanta oo Arbaco ah ayaa lagu sheegay in Axmed Casiiri iyo Saud al-Qahtani lagu soo oogay dacwad ku saabsan “abaabulka dilka Khaashuqji, oo ay u diyaariyeen si ulakac ah”.
Dilka Jamaal Khaashuqji ayaa laga hadal hayay guud ahaan warbaahinta caalamka
Warbixinta dacwad oogeyaasha 18-ka qof ee kale ku eedeysay inay gacantooda ku fuliyeen dilka – waxaana ka mid ah xubin ka mid ah ilaalada boqortooyada Sacuudiga, khabiir ku xeel dambi baarista iyo sarkaal ka tirsan sirdoonka Sacuudiga, kuwaasoo dhammaan horay ula safray Dhaxal-Suge Maxamed Bin Salmaan.
Dacwadaha lagu soo oogay ayaa loo hayaa markhaatiyaal, qalab lagu baaray dilka Khaashuqji iyo diiwaan galin laga sameeyay dad gudaha u galay kana baxay Turkiga, sida lagu sheegay bayaanka.
Dowladda Sacuudiga wali kama aysan hadlin tallaabada uu qaaday Turkiga.
Maxaa ku dhacay Jamaal Khaashuqji?
Wariyaha – oo si iskiis ah uga cararay Sacuudiga sanadkii 2017-kii, kuna noolaa Mareykanka, ayaa 2-dii bishii October, 2018-kii tagay qunsuliyadda Sacuudiga ee magaalada Istanbul, halkaasoo uu ka raadsanayay warqado u fududeeya guurka haweeney u doodaneyd oo lagu magacaabo Hatice Cengiz.
Su’aalo ayaa ka taagan waxa ka dhex dhacay qunsuliyadda Sucuudiga 2-dii bishii Oktoobar
Dambi baareyaasha ayaa aaminsan in haweeneyda oo ku sugeysay bannaanka hore ee qunsuliyadda, isagana lagu dilay gudaha, kaddibna hilibkiisa la jarjaray.
Haraadiga meydka Khaashuqji ayaan wali la helin.
Dilka wariyahan ayaa argagax galiyay dunida. Wakiil ay Qaramada Midoobay u xil saartay baaritaanka arrintan, oo lagu magacaabo Agnes Callamard, ayaa sheegtay in caddeyn la isku halleyn karo loo hayo inay dilkaas si shakhsi ah uga dambeeyeen Dhaxal-Suge Maxamed Bin Salmaan iyo saraakiil heer sare ah oo Sacuudiga u dhashay.
Waxay dalbatay in la sameeyo baaritaan caalami ah oo madax-bannaan.